Vaovao - SGIA 2016 ao Etazonia
Ny seho SGIA 2016 tany Las Vegas dia goavana sy marevaka toy ny tanàna nampiantrano azy. Izahay tao amin'ny ASIAPRINT dia faly indrindra tamin'ity seho ity satria nanana antony mihoatra ny iray ny fahatsapàna izany. Tsy hoe satria manana sidina mahafinaritra mandritra ny 16 ora isika fa mahita olona mahalala fomba sy tsara fanahy any Las Vegas ihany koa.
Nasehonay ny Luxury Calendra Heat Press - Ny nandroso indrindra tamin'ny androntsika voalohany tao amin'ny SGIA Expo 2016. Ilay milina calandra mihaja izay toa manaitra ny mpanjifanay amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fahombiazany dia zava-nisongadina iray hafa tamin'io fampisehoana io. Ary manana mpanjifa iray izahay no nandidy izany talohan'ny SGIA, noho izany dia tsy maka vola be loatra izahay handefasana masinina any Sina. Ny manintona hafa amin'ny fampisehoana anay dia ny milina fanodinana hafanana lehibe 100x100cm (39''x39 ''). Ary ny milina faha-3 dia 40 * 50cm (16''x24 '') press press amin'ny hafanana mazava sy ny tontonana fanaraha-maso PLC. tsy mihoapampana ny milaza fa nahasarika ny ankamaroan'ny mpitsidika izahay ary niteraka mpanjifa vaovao.
Ireo masinina rehetra ireo dia notsapaina tamin'ny lamba avo lenta sy avo lenta tamin'ny fampisehoana tenany ary tsara vintana ho anay, dia namidinay rehetra tao amin'ny SGIA.
Ny tsena amerikana no tsena mitombo ho an'ny milina fanaovan-gazety satria ny Print On Demand dia mitombo mifanaraka amin'izany. Hanohy hikaroka sy hikarakara an'ity tsena ity izahay amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny paikadin'ny tsena. Betsaka ny mpivarotra eo amin'ny fampirantiana izay manafaingana ny hetsika ataonay. Ka aza misalasala mifandray aminay raha manana hevitra vaovao momba anao ny anao
Tianay ny misaotra an'ireo rehetra nanatrika ilay seho ary nahavita fahombiazana lehibe tokoa ary mazava ho azy fa fisaorana lehibe ho an'ireo mpanjifantsika mahatoky rehetra, raha tsy teo izahay.
Izahay dia mifantoka amin'ny famoronana laminasa vaovao mifototra amin'ny fampiharana sy mifantoka amin'ny mpanjifa, indrindra ny vahaolana amin'ny fanontana sy ny fanaovan-gazety. Ny traikefanay dia tsy mitovy amin'ny isan'ny vokatra atolotray ankehitriny, ary faly izahay niara-niasa tamin'ny masoivoho mpampiroborobo sasany, toa an'i Etazonia, Mexico, Thailand, Serbia, Vietnam sns. Nandritra ny fanandramana niainany nandritra ny taona maro sy ny toro-hevitry ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao, Jiangchuan Group dia nanokatra toko vaovao– ASIAPRINT, hikendry ny hamoaka ny marika sy ny vokatra am-pitan-dranomasina. teknolojia famindrana. Amin'ny ho avy, ny Asiaprint dia hanatsara hatrany ny vokatray ary hamoaka ireo vokatra misy marika vaovao kokoa.